KA SHAQEYNTA DHIRTA TUFAAXA GUGA: SIDA LOO BUUFIYO MIRO KA DIB UBAX - GEED GEEDEEDKA
Si aad u ahaato mid deggan oo badan oo ka mid ah dalagyada intooda badan koray, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo iyaga oo leh ilaalin waqtigii loogu talagalay cudurada iyo cayayaanka. Ma aha mid ka reeban arrintani waa geedo geedo waaweyn oo beerta lagu koray. Gaar ahaan, bannaanka u yihiin inta badan xiiso leh waxa la buufiyo tufaax ka hor iyo ka dib ubax. Dhab ahaan, waxaa jira qalabyo badan oo wax ku ool ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida iyo goorta si sax ah loo isticmaalo.
Qaababka ka shaqeynta geedaha tufaaxa guga
Geedi socodka xilliga guga ee guga waa dhacdo muhiim ah oo ka caawisa in laga takhaluso cuduro badan iyo cayayaanka dhirta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato in dagaalka ka soo horjeeda cayayaanka waa in uu ku dhacaa saddex marxaladood.
Marka hore - caadi ahaan wuxuu bilaabmaa bartamihii Maarso (sida ugu dhaqsaha badan heerkulka cimilada oo sii jiri doona + 5 ° C). Waqtigaan, ujeedada ugu muhiimsan ee daaweynta apple waa in laga hortago cudurada iyo baabi'iyo badbaadayaasha jiilaalka, laakiin cayayaanka aan wali laheyn. Ka hor intaan bararka kelyaha, boomaato waxaa lagu sameeyaa isticmaalka kiimikada, taas oo ah, fungicides gaarka ah iyo sunta cayayaanka. Kahor daaweynta tooska ah, waa lagama maarmaan in la jarjiro taajkii, nadiifi jirridda ka soo jilicsan jirtey jirkeed, iyo sidoo kale nadiifinta aagagga burburay oo ka saar caleenta haray ka soo haray sannadkii hore.
Ma taqaanaa? Markaad isticmaasho kiimikooyinka waa muhiim inaad tixgeliso sifooyinka dabiiciga nolosha ee geed, si aad u ogaato waa maxay xilliga sii kordhaya ee geed geedka tufaaxa iyo goorta dhabta ah ay ka gudubto (laga bilaabo bilawgii buro jaban ilaa dayrta ballaaran ee caleemaha). Waa in aadan ka qaybgelin hawlgalka ka dib markii ubax, sababtoo ah tufaaxu wuxuu si dhakhso ah u bilaabi doonaa inuu daaqo.
Marxaladda labaad waxay dhacdaa bilowga xilli sii kordhaya ee geedaha tufaaxa, taas oo ah, marka burooyinkuna ay bilaabaan inay ubaxaan, laakiin geedaha tufaaxa wali ma dhicin (qiyaastii dhammaadkii March ilaa badhtamaha April). Xaaladdan oo kale, ujeeddada daaweynta la sameynayo waxay noqon doontaa burburinta aphids, tuubada, tufaaxa, tufaaxa, geedaha beeraha, iyo cayayaanka kale ee yaryar ee soo kiciya ka dib marka suunka lagu daboolo.
Intaa waxaa dheer, in tufaaxa lagu jiro muddadani waxay kaa caawineysaa inaad ka takhaluso qolofta iyo kallana miro, dhibaatada taas oo sidoo kale aad u muhimsan guga. Kareemka sulphate copper, dareeraha Bordeaux, kolloid kolloid iyo "Lepidocid" (oo ah diyaargarow biological ah oo ka caawisa sidii loola tacaali lahaa cayayaanka geela) ayaa ku haboon in lagu buufiyo. Ugu dambeyntii, sadexaad, marxaladdii ugu dambeysay ee geedaha tufaaxa ee xilliga gu'ga waxa ay muujinaysaa haynta dhacdadan isla markiiba ka dib markii dhirta ay ubaxday. Doorashada kiimikada saxda ah, waxaad ka takhalusi kartaa balanbaalinta, boodboodyada, aphids, aboorka, shilinta iyo weevils. Waxa kale oo lagu qaadaa buufinta waxay u oggolaanaysaa in ay si wax ku ool ah u baabi'iso cudurada muuqata. Marka ubaxyada dhirta tufaaxa ah ay soo gebogeboobaan, buufinta marxaladda labaad ayaa lagu celin karaa.
Waa muhiim! Marka la eego xaqiiqda ah in inta lagu jiro ubax ee geedaha tufaaxa, wax daaweyn ah lama samayn karo, tani waa wakhti ku habboon in la nadiifiyo haramaha oo ka soo baxa geedaha.
Sida loo xalliyo tufaaxa ka dib ubax
Marxaladda ugu dambeysa ee maareynta guga ee dhirta tufaaxa ayaa sidoo kale loo qaybiyaa laba qaybood: koowaad - isla markiiba ka dib ubaxyada geedaha, iyo tan labaad - 3 toddobaad kadib daaweynta hore. Wixii kasta oo iyaga ka mid ah, daawooyinkooda ayaa loo isticmaalaa, taas oo aan ka wada hadli doono hoos.
Maaliyadda ugu caansan xilliga ugu horreeya
Isla markiiba ka dib ubax, taajkii geedaha waxaa lagu buufin karaa sukulat (zinc sulphate) (wuxuu kaa caawin doonaa ka hortagga horumarinta rosette), iyo sidoo kale daroogooyinka kale, oo ay ku jiraan baaruud iyo naxaas - waxay ka ilaalin doonaan dhirta miraha. Si looga takhaluso qolofka (cudurku wuxuu muujiyey caleemo, caws, ubax iyo petioles), ku buufin leh isku dar ah Bordeaux, sulfate copper, polycarbacin (qiyaasta 4 g halkii 1 litir oo biyo ah) ama polykhom ayaa si fiican u caawisa.
Daryeelidda geedka tufaaxa guga, iyo si gaar ah, ku buufinta ka dib ubax, waxaa lagu samayn karaa daawooyinka fungicidal, sodium fosfate (10 g halkii 1 l oo biyo ah) ama diyaargarowga "Skor" (oo lagu qasi karo sida ku qoran tilmaamaha la socda). Si loola dagaallamo aphids iyo nuugista muddadan, tincture ama shukulaatada tubaakada qiyaasta 400 g 10 litir oo biyo ah ayaa kaamil ah, ka dib marka ay ka kooban tahay qiyaasta 10 jeer iyo 40 g saabuun ayaa lagu daraa. Sumoobida keentay waa lagama maarmaan in la buufiyo dhammaan dhirta.
Iyada oo beddel ahaan, tinctures ka sameeyey decoction ah caleemaha yaanyo, dixirigga, løvetann, baradhada iyo yarrow loo isticmaali karaa si loo daweeyo tufaax ka soo cayayaanka ka dib ubax.
Ma taqaanaa? Dhirta geedaha, isteroberyada, jeeriga, geedka iyo geedo kale oo miro leh waxay u baahan yihiin dhibco heerkuleed jiilaalka, sababtoo ah iyada oo aan lahayn, ubaxku si caadi ah uma kobcin karaan. Xitaa haddii qaar ka mid ah ay Bloom, miraha weli ma noqon doonaa sida dhadhan dhirta sida dhirta in jiilaalka dabiiciga ah.
Sida loo daaweeyo geed tufaax ah oo ka soo cayayaanka 2-3 toddobaad ka dib ubax
Beeralayda qaar ka mid ah beerta beeraha leh ee Hure and copper sulphate ma guga hore, laakiin ka dib markii geedo tufaax ah. Laakiin haddii ay dhacdo in copper sulfate sida waqti ku habboon yahay, ka dibna waxaa wanaagsan in ay isticmaalaan HOL si deg deg ah ka dib markii dhirta la soo toosay. Qalab kastaa wuxuu leeyahay waqti u gaar ah, sababtoo ah waxtarka natiijada waxay ku xiran tahay kaliya halbeegga, laakiin sidoo kale waqtiga miisaanka. Tusaale ahaan, markaad ka fekereyso inaad ku xoqdo geedo tufaaxa ah markii labaad kadib markaad ubaxdo (2-3 usbuuc ka dib daaweynta hore), ka dibna waxaad u baahan doontaa diyaargarowga soo socda. "Benzophosphate" - Cuncun dilaac ah oo caan ah. Aad ayay u fiican tahay in la xakameeyo cayayaanka cunidda cayayaanka iyo cayayaanka. Isla mar ahaantaana, diyaarinta ficil ahaan ma dhaawacayso beeska iyo dirxiga ee Booqday. Dheecaan ka shaqeynta waxaa lagu diyaariyaa qiyaas ahaan 70 g oo ah walax 10% iyo 10 litir oo biyo ah, ka dib markii daawada ay saameyneyso saameynteeda 15 maalmood.
Waa muhiim! "Benzophosphate" looma isticmaali karo wax ka badan laba goor xilli.
"Malathion" - Caanobixin kale oo caan ah oo caan ah oo si fiican u cambaareeya caarada, weevils, aphids, xajmiga, aboorada iyo aboorada. Isla mar ahaantaana, daroogadu waa halis loogu talagalay shinni, taas oo aan la iska indho tiri karin haddii ay jirto goobta dabiiciga ah. Halabuurka shaqaynta waxaa lagu diyaariyaa heerka 60 g ee daroogada 10 litir oo biyo ah. Markaad ka shaqeyneysid geedo yaryar oo yaryar, ilaa laba litir oo xal ah waa inay ku dhacaan hal geed, halka dhirta dhirta dhirta qoyan waxay u baahan doontaa ilaa 10 litir oo ka kooban halbeeg.
Xalka Chlorofos - Waxyeelo kale oo cayayaanka ilaysku hayo. Maaha mid aad waxtar u leh marka lala dagaalamo aphids ama weevil, laakiin waa mid aad u sunta ah ee dirxiga iyo dadka waaweyn ee kaneecada, duqsiyada, noocyada qaar ka mid ah kuwa lamid ah iyo shilinta. Saameynta daroogadu waxay socotaa 10 maalmood. Qiyaasta qiyaasta: 70 g oo ah daroogada 10 litir oo biyo ah. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la tixgeliyo in aysan suura gal ahayn in lagu daro dareeraha Bordeaux "Chlorofos".
Waxaa jira daroogo kale oo badan oo la mid ah, laakiin ka hor intaanad bilaabin isticmaalka, hubi inaad akhrido tilmaamaha oo cadee marka ay fiican tahay inaad isticmaasho.
Sida loo buufiyo tufaaxa ka dib ubax
Haddii aad u socoto si aad u daaweyso geedo tufaax ah Bordeaux dareere ah, HOL, ama raadsato habab kale oo wax ku ool ah si aad uga takhalusto geedaha cayayaanka guga, xaalad kasta, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loo buufiyo. First of all, diyaariso dareeraha la soo xulay (mar hore u kala diri biyo), qalab ah ee fulinta habka (bamka) iyo qalabka ilaalinta habboon (maskada, gacmo gashi iyo Oogaaladaha).
Waa sahlan tahay in la buufiyo tufaax colon: Dhammaan wixii lagaa rabo ee kiiskan waa in aad geedka agtiisa u mariso dhowr jeer isla markaana ku buufiso fangasoofka dusha oo dhan. Looma baahna inaad raadiso jaranjarad oo aad u baxdo si aad u hesho laanta sii kordheysa.
Sida geedka dhirta yaryar, ka dibna wax waliba waa mid aad u adag. Waxaa muhiim ah in lagu buufiyo xalka si buuxda dusha sare ee geedka, laga bilaabo jirida iyo dhamaadka sare (isku day inaadan seegin laan hal).
Waa muhiim! Xooga badan oo isku dhafan ayaa sababi kara dhaawac halis ah dhalinyarada, gubashooyinka kiimikada ayaa ka muuqan doona jilif khafiif ah ee caleemaha qaangaarka ah.
Si aad uga fogaato cawaaqibta noocaas ah, sameyso tijaabo yar: dooro hal warshad ah kuna dabool walxaha isku darka ah (laanta hal!). Ka dibna sug maalmo yar (2-3 maalmood) oo kormeer. Haddii dhirta ay u muuqato kuwo caafimaad qaba oo aan lahayn meelo qariib ah meeshii ay ka shaqeyn lahaayeen, waxaa loola jeedaa inaad si ammaan ah u buufin kartaa halbeegga dhammaan dhirta haray beerta.
Xaaladda marka la eego geedka tufaaxa ee hore loo doortay tijaabada, ka dibna ugu dambeyntii waxaad heli doontaa mid ka mid ah laba natiijooyin oo suurtogal ah: midka qaybta khatarta ah ee dhirta ma awoodi doono inuu soo kabsado, ama wakiil kiimiga ma awoodi doono inuu si daran u waxyeeleeyo geed weyn (laakiin markaa waxuu dhaawacayaa dhammaan dhirta dhalinyarada, kuwaas oo dhacaya dhowr maalmood).
Sidaa darteed, waxaad baratay sidii loo buufin lahaa dhirta tufaaxa guga iyo waxa aad u baahan tahay inaad sidaan sameyso, hadda waxay ku jirtaa oo keliya in la helo hababka lagama maarmaanka ah iyo inaad shaqo u hesho (haddii, dabcan, waqtiga sanadka).
Si kastaba ha noqotee, wax kasta oo aad go'aansatid guga si aad u buufiso geedahaaga tufaaxa, si kasta ha ahaato, ha ilaawin ujeedada ay tahay in la sameeyo. Haddii dhirta ay muujiyaan calaamad muujinaysa cayayaanka ama hawlaha cudurka, isticmaalka kiimikada ayaa si buuxda loo caddeeynayaa, laakiin haddii aysan jirin calaamado weeraro ay sameeyaan aphids, leafworms ama martida kale ee aan la martiqaadin inta lagu jiro kormeerka, weli waa suurtogal in la sameeyo iyada oo aan wax ka qaban geedaha tufaaxa guga. cayayaanka. Si kastaba ha ahaatee, waa inaadan ilaawin wax ka hortag ah, sababtoo ah waxay tahay adiga oo kaa badbaadin kara duullaanka cayayaanka waxyeellada leh, oo abuuraya xaalado aad u fiican oo ah horumarinta gabi ahaanba geedaha tufaaxa ee beerta.